Boqolaal ciidan ah oo maanta laga dejiyey magaalada Boosaaso iyo faahfaahin ka soo baxaysa.
June 10, 2021 Xuseen 7
Puntlandtimes (Boosaaso)-Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa maanta lagu soo dhoweeyey boqolaal katirsan ciidanka ammaanka dowladda Puntland oo ka soo kicitimay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Bari.
Ciidamadaan oo tababar ku soo qaatay xerada tababarada Xorgoble ee magaalada Qardho ayaa waxaa duleedka Boosaaso ku soo dhoweeyey taliyaha qaybta booliska Puntland gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud.
Ciidamadaan ayaa la wareegi doona ammaanka magaalada Boosaaso oo siweyn loogaga diyaar garoobayo martigelinta doorashada barlamaanka Soomaaliya gaar ahaan wakiilada deegaan doorashadoodu tahay, Bari, Gardafuu, Sanaag, Haylaan iyo Karkaar.
Ciidamada Booliska ee Puntland.
Waxa soo qaaday gaadiid aan ahayn kuwa ciidamada,waxa ka loo,kuu muuqan in aysan lahayn wax taxadar ah,sida ay gaariga u saaranyihiin.
Xaruuntii tababarka Ciidamada ee Carmo,miyaa la xiray?
War Deni iyo xulufadiisa Aaran Jaan iyo kooxda Faroole waa in aan laga aamusin inta aysan arimaha Puntland aysan faraha ka bixin.
War runta iyo xaqiiqda jirta ee ee curyaamisay Puntland ha laga hadlo.
Ciida Galr says:
Adigu ma leedahay guri lagu tababayo ciidanada. Mase waxaad jeceshahay in aad wax walba wax ka sheegtid. Xerada Xorgoble. A Eriteria ayey ku yaal?
Sheeko sheeko xariir, Waa maleeshiyo Qabiil lugu naas nuujiyo dhar Qaran loo soo geliyay .meey aadan hadey ruun tahay ciidan yihiin ceergaabo laascanood Xoog lugu haysto la xoreeyo
MAHAD ALI adiga soo MOORYAAN ma TIHID maxaa kaa galay ARIMAHA puntland??
Kkkkkkkkk dad aan dhul iyo deegaan toona lahayn ayaa puntland afka la siigalaya war kuwiinnaan ku mashquulay dhul weynaha puntland iyo dad u tashaday deegaankooda waad aragtaan waxa mashaariic xariga laga jarayo puntland gudaheeda maalin walbo, kuwa edeb darrada iyo beenta iyo borobogaanka meel ahaan ku sooqoraya waa reer garbahaareey, reer laascaano iyo reer caabudwaaq kkkkkkk bal dib u eega magaalooyinkaas aan soo sheegay nolosha ka jirta kkkkk waa deegaano burburay oo cid ka taliso aan la aqoon kkkkkk ayadoo deegaankoodii uu sidaa u baaba, ay ayeey puntland oo caalamka la jaan qaaday wax ka sheegayaan.
Ali: dhamaan deeganada aad kor ku Xustay dadka u dhashay Rag iyo gabdho waxay ka buuxaan Bosaso, Garowe, Qardho, Burtinle,Galdogob iyo Galkayo waxayna u soo haajireen waa Nolol Raadis waxayna qabtaan shaqo kasta oo ay Helaan. Aliyow waxaa intaas ka daran dadkan Nolol doonka ah ee ka soo qaxay deeganada aad sheegtay lagama heli karo hal qof oo reer Puntland ah oo ku Nool deegaanadaas aad Xustay Xitaa gabadh la qabo oo Xaas ah.
Ma Maqashay Ciirtaada dhame ayaa Caydaada yaqaan taas baa taal Meesha.
Marka u sheeg inay Edeb yeeshaan iskana Cayshaan ileyn waa Somaliye.
Majeerteen oo sidiisaba ah (in yar mooyee) Xabashi-kalkaal ayaa dhexdooda isa sii gumeysta.
Maskax yare, mallay xadhig ku dabe, murama naagoodle,
Macaan iyo qadhaadh aan is-geyn, meel sugu geeye,
Maseyii hooyadii lagu furiyo, gabay Majeerteenle,
Mabda’ iyo ujeeddaduu lahaa, muujin kari waaye,
Micnahaad ujeeddana dadkii, maandhow garan waye,
Masalooyinkaagii maxaa dheri ku meermeershay,